जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड बेलबारीमा हुने - निष्पक्षखबर
जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड बेलबारीमा हुने
निष्पक्ष खबर / 67 Views
खेलकुद प्रदेश नं. १ स्थानीय तह
बेलबारीः मोरङको बेलबारीमा यही फागुन २१ गतेदेखि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता २०७६ हुने भएको छ । ३ दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका लागि बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संयोजन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
लक्ष्मी माविको खेल मैदान तथा १ नम्बर वडामा रहेको बौद्ध गुम्बामा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने संयोजन तथा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । १७ स्थानीय तहका १ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने भएका छन् ।
एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, सितेरियो कराते, तेक्वान्दो र उसुका खेल सञ्चालन हुने संयोजन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बताए ।
अर्थ मन्त्री भन्छन्, ‘चैतको पहिलो साता नयाँ गभर्नर’
इलाममा माइभ्याली अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता शुरु
लेटाङ नगरपालिकाले तय गर्यो राहत प्याकेज
२०७६ चैत्र २१, शुक्रबार	• No Comment
स्थिर रह्यो अमेरिकी डलरको भाउ
दिनमा २ घण्टा सञ्चालन भइरहेको सुन्दरपुर साकोस (सहकारी दिवस विशेष...
२०७६ चैत्र २०, बिहीबार	• No Comment
बेलबारीको विपद व्यवस्थापन कोषमा पहिलो दिन ५५ हजार बढी जम्मा
विपतको अवस्थामा कृषि सहकारीले यसरी काम गर्न सक्छन् (सहकारी दिवस...
२०७६ मंसिर १२, बिहीबार	• No Comment
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार...
२०७६ मंसिर २, सोमबार	• 1,360 Comments
२०७६ मंसिर १४, शनिबार	• No Comment
२०७६ फाल्गुन १४, बुधबार	• One Comment
२०७६ मंसिर ५, बिहीबार	• 396 Comments
प्रदेश नं. १ मुख्य समाचार स्थानीय तह
प्रशान्त निरौला / 72 Views
निष्पक्ष खबर / 11 Views
अर्थ शिक्षा / स्वास्थ्य
दिनमा २ घण्टा सञ्चालन भइरहेको सुन्दरपुर साकोस (सहकारी दिवस विशेष ५)
निष्पक्ष खबर / 74 Views
शिक्षा / स्वास्थ्य स्थानीय तह
निष्पक्ष खबर / 85 Views
अनलाइन समाचारको भीडमा हामी पनि मिसिएका छौं । हामी भीडमाथि भीड थप्न नभई पत्रकारिताको सिद्धान्तमा रहेर निष्पक्ष खबर प्रकाशन गर्न हाजिर भएका हौं । खोजमूलक र तथ्ययुक्त समाचार पस्कने हाम्रो उद्देश्य हो । समाजलाई मार्गदर्शन गर्न र आवाजविहीनको आवाज मुखरित गर्न हामी अग्रसर हुने जानकारी गराउँदछौं ।
अध्यक्षः टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादकः खेमचन्द्र अधिकारी
सम्पादकः ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पर्कः ९८५११३३२९९, ९८४२१९२४१२, ९८०४०५३७९९
विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित निष्पक्ष खबर डट कम सुन्दरहरैँचा, मोरङ
© निष्पक्षखबर 2019. All Right Reserved